Mobogenie कार्यक्रम - हटाउन कसरी?
सुरू गर्न हामी अझै पनि गर्न के पहिचान छ। आफ्नो पीसी गर्न इन्टरनेट बाट डाउनलोड कुनै पनि सफ्टवेयर को स्थापना पछि एक दिन, तपाईंले निमन्त्रणानगरिएकोजडान अतिथि अप घाउ भनेर पत्ता लगाउन सक्छ। पछि देखि समस्या एक पीसी मा एक्लै, Mobogenie संग छैन आउँछन् विभिन्न अतिरिक्त खोज इन्जिन मा प्राप्त गर्न सक्छन्, ब्राउजरहरू विज्ञापन साइटहरू र "retard" तपाईंलाई रिडाइरेक्ट हुनेछ। नै, यो अनुप्रयोग भाइरस, तर बस छ एक फाइल प्रबन्धक Android को लागि, त तपाईं एक masochist हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफैलाई छोड्न सक्नुहुन्छ Mobogenie। कसरी फोहोर तल वर्णन गरिने कम्प्युटर हटाउन।
तपाईं भाग्यशाली हो भने
Mobogenie विभिन्न तरिकामा आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सरल फारममा - कुनै पनि निःशुल्क कार्यक्रम स्थापना गर्दा। त्यसैले, इन्टरनेटबाट केही डाउनलोड, सावधान स्थापना गर्दा हुन। त्यसैले तपाईंलाई प्रश्न ग्रस्त छैन: "शब्द Mobogenie कसरी हटाउने।?" - तपाईं बस थप कार्यक्रम को स्थापना को अगाडि चेक मार्क हटाउन आवश्यक छ।
साथै, त्यहाँ निःशुल्क कार्यक्रम बढी धूर्त स्थापनाकर्ताहरू छन्। पहिले तपाईं उदाहरणका लागि स्थापना गर्न, ब्राउजर "Amigo" प्रेरित गर्नेछ। यस मामला मा, तपाईं प्रेस गर्न "रद्द गर्नुहोस्" आवश्यकता हो, त्यसपछि Mobogenie पनि, प्रेस गर्न "रद्द गर्नुहोस्" आवश्यक छ। र मात्र पछि कार्यक्रम को सेटअप मेनु तपाईं डाउनलोड हुनेछ।
पाठ्यक्रम कम्प्युटर को रोगहरु, को रोकथाम, महत्वपूर्ण। तर तपाईं अझै पनि होसियार थिए, र Mobogenie स्थापित गर्न व्यवस्थित कि कल्पना गर्नुहोस्। कसरी हटाउने? साधारण मामला मा तिमी सिर्फ जान आवश्यक नियन्त्रण प्यानल र सुरु भएको "थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् कार्यक्रममा।" तपाईं "Mobogenie" भनिने लाइन फेला पार्न र क्लिक गर्नुपर्छ "मेट्नुहोस्।" साथै यो वा विस्थापित मूल जो तपाईं अज्ञात छ सबै अनुप्रयोगहरू, खर्च गर्न राम्रो हुनेछ। तपाईं कम्प्युटर, कार्यक्रम, र उत्पादन परिचित छैनन् भने, त्यसपछि यसलाई राम्रो आफ्नै गर्न छ।
को "थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् कार्यक्रममा" मा भने कुनै Mobogenie, यो कसरी हटाउन, मलाई तर्क भन्छु। यस पुस्तिका प्रयोग र सिस्टम मा आवेदन गर्न सबै सन्दर्भहरू फेला। को टोकरी मा राख्दै बिना हात द्वारा तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। फोल्डर मा क्लिक गरेर यो गर्न, दायाँ-क्लिक गर्नुहोस, सिफ्ट समाउनुहोस्। तपाईं कुनै पनि फोल्डरहरू मेटाउने, तपाईं गर्न रजिस्ट्री "ठीक" आवश्यक हुनेछ। यो सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त कार्यक्रम CCleaner छ। स्थापना र सञ्चालन, डाउनलोड गर्न। मेनु मा, ट्याब रजिस्टर जाने - खोज समस्या - यसलाई ठीक।
निर्णय जारी ( "Mobogenie स्थापित। म कसरी हटाउने?") पूर्णतया ब्राउजर खाली बिना वर्णन गर्न सकिँदैन। आफैमा यो उपकरण छैन भाइरस छ सम्झना, तर केवल आफ्नो कम्प्युटरमा अन्य साइटहरु पुनः निर्देशित ब्यानरहरू रूपमा भाइरल गतिविधि यस्तो manifestations र कम्प्युटरमा उपलब्धता Mobogenie निर्भर सक्दैन, सुरु पृष्ठ परिवर्तन भनेर आत्म-स्थापित।
यस्तो अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो ब्राउजर खोल्न र सेटिङ मा प्राप्त गर्न आवश्यक छ। तपाईं पूर्णतया निर्वहन वा पनि reinstallation खर्च गर्न भने राम्रो हुनेछ। तपाईं पनि विस्तार खन्नुहोस् र यदि तिनीहरूले अतिरिक्त प्लग-इन्स हेर्न आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूले पनि मेटिने गर्नुपर्छ।
कि निर्माताहरू Mobogenie एक पटक कम्प्युटर चलिरहेको (आधिकारिक साइटबाट डाउनलोड यदि), आफ्नो सफ्टवेयर कुनै भाइरस छन् भन्ने आश्वासन तथ्यलाई बावजुद, तपाईं अचानक यस आवेदन आफ्नो स्थापना पाउन सक्छ। कहाँ? कसरी? प्रश्न पर्याप्त रोचक छन्। विशेष गरी हिजो यदि तपाईं एक पूरा हटाउने र यस "उत्पादन" को प्रणाली शुद्ध पार्नुभएर थियो। त्यसैले शायद Mobogenie - भाइरस? कसरी यो मामला मा हटाउन?
त्यहाँ जटिल केही छ। माथि वर्णन गरिएको छ कि एउटै कार्यहरू। मात्र सफा कम्प्युटर एन्टिभाइरस बाहेक। यो सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त SpyHunter छ। तर यदि यो तपाईंको समस्या समाधान गर्दैन, त्यसपछि यो समय थप गम्भीर को उत्पादनहरु लागू गर्न, आफ्नो कम्प्युटर इन्टरनेटमा सामग्री डाउनलोड कि संक्रमण फँस मा तपाईं किनभने सम्भवत छ। जाँच एन्टिभाइरस डा सिस्टम वेब, शुल्क पनि निःशुल्क एउटा पोर्टेबल संस्करण भन्दा भाइरस पत्ता लगाउन सक्षम छ। मूल बाटो "Kaspersky" हुनेछ। निस्सन्देह, यो शङ्काको जगाउने कि बिल्कुल सबै ब्लक, तर प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।
तिनीहरूले प्रयोग गरिन्छ साँचाहरू पत्रिका "Kaspersky" र कसरी के के हुन्?
केही उपयोगी सुझावहरू - "एन्ड्रोइड" एक ट्रोजन कसरी हटाउने
भाइरस सबै फाइलहरू गुप्तिकरण। यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
कम्प्युटर भाइरस - एक समस्या धेरै प्रयोगकर्ताहरू
भाइरस एन्टिभाइरस साइटहरु असक्षम: के?
हात dumbbells संग अभ्यास आफ्नो मांसपेशिहरु वृद्धि र आकार मा आफ्नो शरीर राख्न मद्दत गर्नेछ
देख्यो ब्लेड - काटन उपकरण
कसरी एक ग्याँस बॉयलरको लागि ईन्टरनेटर छनौट गर्ने? इन्टरनेटको लागि ग्याँस बॉयलर
Multifunctional सुरक्षा अनुगमन StarLine M32 CAN सिस्टम: प्रमुख सुविधाहरू, लाभ
धेरै पहिले एनिमे कहिल्यै
छोटो कथा "द कमिला र फट्याङ्ग्रा" (Krylov IA): सामग्री, इतिहास Fables र नैतिकता
को छाला विवाह दिन के सुझाव
स्मृति प्रशिक्षण: अभ्यास र प्रविधी
गर्भावस्था को समयमा र महिनावारी समयमा कर्पस luteum सानो ट्युमर
सेनेगलकी स्ट्राइकर Demba बा
रेस्टुरेन्ट "Torro ग्रिल" Paveletskaya, मास्को मेनू, समीक्षा